को’रोना संक्र’मितको उपचार गर्दागर्दै नर्स प्रमिलाको आँखामा ज’टिल स’मस्या। – Nepal Online Khabar
को’रोना संक्र’मितको उपचार गर्दागर्दै नर्स प्रमिलाको आँखामा ज’टिल स’मस्या।
असार ९, २०७८ बुधबार 360
काठमाडौं : नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालको को-भि’ड वार्डमा कार्यरत नर्स प्रमिला अधिकारी, आँ’खाको स्ना’यु सम्वन्धि ज’टिल स’मस्या देखिएपछि हाल काठमाडौंस्थित अन्नपूर्ण न्यू’रो अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ ।
२७ वर्षकी अधिकारीलाई ले’फ्ट अ’प्टि’क न’र्भ इ’न्फ्ला’मे’ट’री लि’स’न’को स’मस्या देखिएको हो । यस्तो स’मस्या हुँदा बि’रामीको आँखाको ज्यो’तीसमेत गु’म्ने ख’त’रा रहन्छ । उहाँको पनि एक आँखामा स’मस्या देखिएको छ । अर्काे आँखाको अवस्था सु’धारोन्मुख देखिएको छ ।
नर्सिङ संघ बाँकेले प्रमिलाको उपचारका लागि ५० हजार ४० रुपैंया संकलन गरि सहयोग गरेको छ । सहयोगका लागि- नाम : प्रमिला अधिकारी , खाता नंम्वर : ०२०५७५०९७९१०१००१. एनआइसि एसिया बैंक
Prevअक्षय कुमारको ‘रक्षा बन्धन’को सुटिङ सुरु
Nextटिकटकमा ‘पानी पानी’ गीतमा नाचेर भाईरल भएका बिना र सरोज मिडियामा । करोडौंले हेरे, के यि दुई प्रेम जोडी हुन् ।(भिडियो सहित))
मुलुकभर थप १३८८ जनामा को’रोना पुष्टि, २२६० जना निको भए !
वाईसीएल नेपालले लञ्च गर्‍यो आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट !